Wasiirka cusub ee Wasaaradda Maaliyadda oo Warqad is-casilaad ah u gudbiyey Golaha Wakiillada Somaliland | FooreNews
Home wararka Wasiirka cusub ee Wasaaradda Maaliyadda oo Warqad is-casilaad ah u gudbiyey Golaha Wakiillada Somaliland
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Maaliyadda oo Warqad is-casilaad ah u gudbiyey Golaha Wakiillada Somaliland
Hargeysa(Foore)- Wasiirka cusub ee Wasaaradda Maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Samaale, oo ka tirsanaa Masuuliyiin cusub oo uu Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Siilaanyo u magacaabay xilal kala duwan, ayaa golaha wakiillada u gudbiyey Warqad Iscasilaad ah.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Cabdicasiis Samaale ayaa Shir-guddoonka Golaha Wakiillada u gudbiyey warqad uu iskaga casilay xilkii Guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo xubinnimadii golaha Wakiillada, Isla markaana waxa uu Xildhibaannada Wakiillada ka dalbaday inay ka aqbalaan is-casilaadda uu u gudbiyey Shir-guddoonka Wakiillada, gaar ahaan Guddoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro).
Waxaanu qoraalkaasi uu Wasiirka Maaliyadda Somaliland Cabdicasiis Samaale isku casilay oo koobnaa u dhignaa sida: “Waxaan idinla socodsiinayaa, Anigoo ah Md. C/Casiis Maxamed Samaalle inaan maanta oo Arbaca ah oo taariikhdu tahay 14.03.2012 iska casilay xilkii Guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo xubinimaddii Golahaba. Waxaan Golaha ka rejaynayaa inay aqbali doonaan is-casilaaddayda. Waxaan si weyn ugu mahad-naqayaa shir-guddoonka iyo dhammaan mudaneyaasha Golaha Wakiillada JSL oo aan muddo dheer wada shaqaynaynay”
Dhinaca kale, Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa sheegay inay isti-qaaladdan u gudbin doonaan Goleweynaha Wakiillada, si Mudanayaasha goluhu u aqbalaan, isla markaana u ansixiyaan is-casilaadda Guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee hore ee Wakiilla Md. Cabdicasiis Samaale.
Previous PostCabdicasiis Samaale oo markii ugu horreysay ka hadlay Xilka Cusub ee loo magacaabay, Masuuliyaddii uu hore umadda ugu hayey iyo Shakhsiyadda Wasiirka uu xilka kala wareegayo Next PostCiidamada ammaanka Hargeysa oo xabsiga u taxaabay Boqor Buur-madow oo saaka ka soo degay madaarka Caasimadda